जिताउनुपर्छ भन्ने जनलहर मेरो पक्षमा छ : जगत विश्वकर्मा | Nepal First Dalit Online News Portal: www.dalitonline.com
जिताउनुपर्छ भन्ने जनलहर मेरो पक्षमा छ : जगत विश्वकर्मा
अधिकारको लडाईं लडेको, सक्षम, २१/२२ वर्षकै गाविस उपाध्यक्ष भएको, विकासको नेतृत्व गरेको र उत्पीडित दलित समुदायमा पछाडि परेको समुदायमा जन्मिएको हिसाबले पनि मप्रति सहानुभूति छ ।
तपाईंलाई कास्की क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाताले किन भोट दिने ?
वाम गठबन्धन आम जनताकासामु जुन लक्ष्य र संकल्पका साथ संविधान कार्यान्वयन गर्न र स्थिर सरकारका लागि यो निर्वाचनमा होमिँदै छ । स्थिर सरकार नहुँदा विकास र समृद्धिको बाटोमा जान सकेन । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण ६÷६ महिनामा सरकार फेरिने र गिराउने खेलले सिंगो राजनीतिक दल र नेता नै वदनाम हुने अवस्था मुलुकले भोग्यो । यो दुर्घटित राजनीतिबाट जोगाएर सिंगो देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य हो । यही कार्यभार पूरा गर्नका लागि सुखी र खुसी नेपालीका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । त्यसैले पनि वाम गठबन्धनबाट मलाई जिताउनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
म सानै उमेरदेखि नै राजनीतिमा होमिएको, सामाजिक अधिकारको लडाईं लडेको व्यक्तिमात्रै होइन । म २१/२२ वर्षकै उमेरमा स्थानीय निकाय चलाएको व्यक्ति पनि हुँ । त्यो अनुभव पनि छ मसँग । २०५२ सालमै मलाई साविकको लामाचौर गाविसवासीले उपाध्यक्षमा जिताउनुभएको थियो । गाउँठाउँको विकास निर्माणको काममा सधैं अगुवाइ र नेतृत्व गरेका हिसाबले, जनताको बीचमा रहेर जनताको सुखदुखमा रहेका हिसाबले पनि मलाई विजयी गराउनुहुनेछ । समृद्धिको महाअभियानमा कास्की क्षेत्र नम्बर ३ बाट मलाई जिताउनुहुने भन्ने विश्वास छ । अहिले हामीले जुन घोषणापत्रका साथ चुनावमा होकिएका छौं त्यो पूरा गर्न पनि मतदाताले मलाई मत दिनुहुनेछ । भौगोलिक र विकासका हिसाबले पछाडि परिरहेको छ तर सम्भावनाका हिसाबले अथाह रहेको हुँदा त्यो सम्भावनालाई पूरा गर्न पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।
कास्कीमा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा यही क्षेत्रमा हुन्छ भन्छन् नि ?
आम मतदाताकोमा पुग्दा हामीले के पाइरहेका छौं भने अहिले जो देशकासामु जे चुनौती छन्, संविधान जारी भएसँगै अहिले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान बहुमतको सरकार गठन चाहिन्छ भन्ने छ । सबै राजनीतिक दललाईसँगै लिएर देशलाई विकासको बाटोतर्फ लैजान राष्ट्र निर्माणको यो अभियानमा त्यस्तै खालको दल र नेतृत्व आवश्यकता छ । देशका यी चुनौती र अभिभारा जिम्मेवारी लिन सक्ने दल स्वभाविक रुपमा वाम गठबन्धन नै भएको विषयमा मतदाताको एकरुपता छ । मप्रति सद्भाव पनि छ, कास्की क्षेत्र नम्बर ३ का बासिन्दाको ।
कास्कीमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरु सबै युवा पुस्ताका छौं । नयाँ जोशजाँगरका साथ केही गरौं, जन्मेको ठाउँलाई विकास गरेर सबै जनतालाई समानरुपमा कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने भावना र चाहना सँगसँगै परिवेश र परिस्थितिले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने सोचका छौं । क्षेत्र नं. ३ भूगोलका हिसाबले विकट छ । तर, अथाह विकासको सम्भावनालाई पूरा गर्न वाम नै चाहिन्छ भन्ने मतदाताको मनोभावनालाई हामीले बुझेका छौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि लोकप्रियताको हिसाबले पनि वाम गठबन्धनलाई जनताले चाहेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । कांग्रेस नेता शुक्रराज शर्माप्रति मेरो सद्भाव छ । उहाँ मेरो अग्रज हुनुहुन्छ । व्यक्तिको योगदानलाई सम्मान गर्दै दोसल्ला, तक्मा गर्न सकिन्छ । तर, गाउँठाउँका चुनौतीको सामना गर्ने सामथ्र्य र क्षमता, भिजन भएको व्यक्तिलाई मत दिएर चुनाव जिताउनुपर्छ ।
कसले जित्ने हार्नेभन्दा पनि कसलाई जिताएर देश र जनताको भविष्य निर्माण, राजनीतिक स्थिरता र देशको विकास गर्ने युवालाई मत दिनुपर्छ भन्ने मतदाताको बुझाइ छ । म उत्पीडित दलित समुदायमा पछाडि परेको वर्गमा जन्मिएको हिसाबले पनि मलाई सहानुभूति छ ।
को कहाँ जन्मिने भन्ने कुरा कुन वर्ग समुदायमा जन्मिने भन्ने कुरा व्यक्तिको रोजाइको कुरा होइन । कुन जाति, भाषा, वर्ग रोजेर जन्मिन नमिल्ने हुँदा प्राकृतिक प्रक्रियामा जो जहाँ पनि पर्छ । मलाई गर्व छ समाजमा पछाडि परेको वर्गमा जन्मिन पाएको हुँदा, समाजमा हुने पीरमर्का, दुख समस्या सबै मैले प्रत्यक्ष भोग्न पाएँ, बुझ्न पाएँ, त्यो सबै पीडा मर्मको प्रत्यक्ष आफैंले अनुभव गरेको हुँदा देश बनाउनुपर्छ । गाउँठाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने संकल्प लिएर सानै उमेरमा जनप्रतिनिधिको भूमिका खेलेको र त्यसमा सफल भइसकेको हिसाबले पनि जगत विश्वकर्मालाई जिताउनुपर्छ भन्ने जनलहर मेरो पक्षमा उर्लेर आएको छ । विगतमा कांग्रेसमा मत दिनुभएका अग्रजहरुले पनि अहिले मलाई देश र जनताको कल्याण गर भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ ।
तपाईं केपी ओलीको प्रिय भएकै कारण टिकट पाएको पनि भन्छन् । त्यसैले अलि छिट्टै प्रतिनिधिसभाको टिकट पाउनुभयो भन्छन् नि ?
स्वाभाविक रुपमा म सानै उमेरदेखि नै सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलमा लागेको तथा पार्टीको सानो तहदेखि सबै स्थानमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई पालना गरेको, गोरखा र मनाङ जस्ता दुर्गममा गएर त्यहाँका जनता र पार्टी निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई मूल्यांकन गरेको महसुस गरेको छु ।
समावेशीको आवाज, पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि बढाउने सिंगो नेपाली समाजको दायित्ववोध गरेर पार्टीले उम्मेदवार बनाएको हो । विकास र समृद्ध नेपाल बनाउने अभिभारा पूरा गर्नका निम्ति एक इमानदार कार्यकर्ताको हिसाबले तथा मप्रतिको विश्वासले मलाई टिकट दिएको हो ।
मलाई जसले नजिकबाट बुझ्नु भएको छैन वा कम बुझ्नुभएको छ उहाँहरुलाई छिटो पाएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर पार्टीमा मैले २८/२९ वर्ष राजनीतिक जीवन बिताएको छु । निरन्तर हिसाबले काम गरेको पनि छु । सानो उमेरदेखि नै राजनीतिमा सक्रियाताका साथ काम गरेको हुनाले नै, २२ वर्षको उमेरमा पार्टीले त्यो उमेरमा टिकट दिएको र त्यो बेला नै जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्ने अवसर पाएको थिएँ । मलाई नजिकबाट बुझ्नेले मैले पाएको अवसरलाई छिटो पायो भन्ने अर्थमा बुझ्नुभएको छैन ।
कांग्रेसका पाका नेता शुक्रराज शर्मा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । चुनाव जितेर आफ्नो प्रतिष्ठामा इँटा थप्न सक्नुहोला त ?
पहिलो कुरा त अहिलेको निर्वाचन देशको प्रतिष्ठासँग नै जोडिएको छ । निर्वाचनलाई मर्यादित ढंगबाट सम्पन्न गरेर सिंगो देशको प्रतिष्ठा माथि उठाउनुपर्नेछ । पाका नेता वा युवा नेता कसले जित्नेभन्दा पनि अहिले देशको आवश्यकता के हो भन्ने मतदाताले बुझेका छन् । विगतमा देशको राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नै आँच आउने गरेर जे गतिविधि भए र भूमिका भए, अहिले हामीले यो निर्वाचनलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लगेर संविधान कार्यान्वयन गरेर विकास र समृृद्धिको दिशातर्फ लैजानुपर्नेछ । कुन दलले हार्ने र जित्ने प्रमुख कुरा होइन । देशलाई जिताउने कुरामा सबै लाग्नु प्रमुख कुरा हो ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न अनुरोध गर्न चाहान्छु । बाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्दै गर्दा, युवा उम्मेदवार भएको नाताले पनि संकल्पका साथ सिंगो कास्कीलाई समृद्ध बनाएर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संकल्पका साथ उम्मेदवार बनेको छु । मैले जित्नेछु । सबैको भावना र विचारको प्रतिनिधित्व गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हिसाबले इमान्दारीसाथ निष्ठापूर्वक सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।
प्रकाशीत २०७४ मंसिर १८